दिल्लीपछि अब कुन टिममा जादैछन् सन्दिप ? आईपिएलमा यस्तो छ सन्दिपको भबिष्य | TajaKhabarTV
इङ्ल्यान्ड जानु अघि भारतीय टोली ८ दिनको कडा क्वारेन्टिनमा बस्दै
जिताउन नसकेको भन्दै किङ रोनाल्डोलाई टिमबाट निकाल्न उनकै फ्यानको माग, रोनाल्डोको भबिष्य नै संकटमा
भारतिय कप्तान किङ कोहलीको लगाए कोरोना भ्याक्सिन
अर्का भारतिय क्रिकेटरले कोरोनाको कारण आफ्नो पितालाई गुमाए
दिल्लीपछि अब कुन टिममा जादैछन् सन्दिप ? आईपिएलमा यस्तो छ सन्दिपको भबिष्य
२०७७, २९ पुष बुधबार २१:०८ January 13, 2021 ताजा खबरक्रिकेट
काठमाडौं : इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्लब दिल्ली क्यापिटल्सले आगामी २१ जनवरीमा सन्दीप लामिछानेलाई ‘रिलिज’ गर्न सक्ने भारतीय मिडियाहरुले जनाएका छन्। आईपीएलको मिनी अक्सन ११ फेब्रुअरीमा गर्ने भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ले निर्णय गरिसकेको छ। त्यसका लागि सबै फ्रेन्चाइजलाई २१ जनवरीसम्म रिटेन तथा रिलिज गरिएका खेलाडीको सूची सार्वजनिक गर्न भनिएको छ। सन्दीपले तीन सिजन दिल्ली क्यापिटल्सका लागि खेलिसकेका छन्।
आईपीएलमा उनी तीन वर्षअघि दिल्ली डेयरडेभिल्सका लागि आधार मूल्य २० लाख भारुमा आबद्ध भएका थिए। यो सम्झौता अधिकतम् तीन वर्षसम्मका लागि थियो। डेयरडेभिल्सले सन् २०१९ को सिजनदेखि दिल्ली क्यापिटल्सको नाममा आईपीएल खेल्न थालेको छ। दिल्लीले रिटेन वा रिलिज गर्ने २१ जनवरीमा नै थाहा हुने उनका व्यवस्थापक रमन सिवाकोटीले बताए। तीन वर्ष पूरा भइसकेकाले नयाँ अक्सन हुनुपर्ने भए पनि रिटेन गर्ने वा नगर्ने टीमकै हातमा भएको उनी बताउँछन्।
यो वर्ष सन्दीपसँगको सम्झौता सकिएका कारण उनलाई दिल्ली क्यापिटल्सले रिटेन नगर्ने अनुमान भारतीय मिडियाहरुको छ। दिल्लीले सन्दीपसहित नौ खेलाडीलाई रिलिज गर्नसक्ने बताइएको छ। जसमा विदेशी कोटाका किमो पल र एलेक्स केरी पनि छन्।
दिल्लीले खेलाडी किन्नका लागि अझै थप नौ करोड रुपैयाँ खर्चन सक्छ। यसमा खेलाडी रिलिज हुँदा उसका लागि खर्च गरिएको पैसा पनि जोडिन्छ। यसकारण दिल्लीले टीम बलियो बनाउन सबै नौ खेलाडी रिलिज गर्ने संभावना छ।
सन्दीप पनि रिलिज भए उनलाई अर्को कुनै टीमले किन्नुपर्ने हुन्छ। मिनी अक्सनमा उनीमाथि कुनै टीमले बोली नलगाए उनको आईपीएल यात्रा रोकिनेछ। तर, कुनै टीमले बोली लगाए उनले यसअघि पाएको भन्दा बढी रकम पाउने छन्। किनभने उनलाई कुनै पनि टीमले आबद्ध गरे आधार मूल्यभन्दा बढी बोली लगाउने निश्चित छ।
आईपीएलको एक टीमले अधिकतम् २५ र न्यूनतम् १८ खेलाडी राख्नुपर्छ। जसमध्ये अधिकतम् आठ विदेशी खेलाडी राख्ने छुट छ। दिल्लीसँग अहिले २२ खेलाडी छन्। गत सिजन दिल्लीले नौ खेलाडीलाई नै रिलिज गरेको थियो भने आठ नयाँ खेलाडी भित्र्याएको थियो।
यो सिजन सबैभन्दा बढी चेन्नाई सुपर किङ्सले १२ खेलाडी रिलिज गर्न सक्छ। त्यस्तै किङ्स इलेभन पन्जाब र राजस्थान रोयल्सले ११ तथा मुम्बई इन्डियन्स र सनराइजर्स हैदरावादले १० खेलाडी रिलिज गर्ने संभावना छ। सबैभन्दा कम रोयल च्यालेन्जर्स बैङ्लोरले सात र कोलकाता नाइट राइडर्सले आठ खेलाडी रिलिज गर्ने संभावना छ।
यसबाहेक ट्रेड विन्डोबाट पनि खेलाडी अर्को टीममा सामेल हुनसक्छन्। यसमा दुई टीमबीच समझदारीमा खेलाडीले टीम बदल्न पाउँछन्। आईपीएलले गएको सोमबार नै ट्रेड विन्डो खुला गरिसकेको छ। ४ फेब्रुअरीमा ट्रेड विन्डो बन्द हुनेछ। त्यसपछि मिनी अक्सन हुनेछ।
२०७८, २८ बैशाख मंगलवार १२:५७
२०७८, २७ बैशाख सोमबार २१:४६
२०७८, २७ बैशाख सोमबार २०:५९
२०७८, २८ बैशाख मंगलवार १०:०२
यी क्रिकेटरले कोरोनाका कारण आमासँगै दिदी गुमाइन्
२०७८, २७ बैशाख सोमबार १९:२९
२०७८, २२ बैशाख बुधबार १९:२५
बिल गेट्ससँग डिभोर्सपछि विश्वकै दोस्रो धनी महिला बनिन् मेलिन्डा गेट्स
काठमाडौं : पति बिल गेट्ससँगको सम्बन्धविच्छेदपश्चात मेलिन्डा गेट्स विश्वकै दोस्रो धनी महिला…